पाँचथरको हिलिहाङमा रहेको मृदुङ्गा झरनाका किन ओइरिए पर्यटक ? « Sajhapath.com
पाँचथरको हिलिहाङमा रहेको मृदुङ्गा झरनाका किन ओइरिए पर्यटक ?
पाँचथर साउन १८ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको पहुँच मार्ग र तमोर करिडोर सडकका कारण पाँचथरको हिलिहाङ गाउँपालिकामा रहेको मृदुङ्गा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको भिडभाड बढेको छ ।
ठूलाठूला चट्टानका बीचबाट झरेको झरना निकै आकर्षक र सुन्दर देखिनाले यहाँ पर्यटकको भीड लाग्न थालेको हो । यो झरना हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नं ३ र ४ को सिमानामा रहेको छ ।
मेची राजमार्गबाट हिलिहाङ–१ भालुचोक र फेदापाबाट करिब एक घण्टा यात्रा गरेपछि यो झरनासम्म पुग्न सकिन्छ । सबै प्रकारका सवारीका साधन यहाँसम्म पुग्नसक्ने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको चाप दिनानुदिन बढिरहेको स्थानीय व्यवसायी सुरेश चापागाईले बताए । चापागाईका अनुसार सडक पुगेपछि झरनामा तस्बिर लिने र सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने क्रमले यो झरना प्रचारमा आएको हो ।